Dhamma Video - Browse Media - á€•á‚’á€¬á€”á€¹á€¸
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ- 550 Buddha Story - ၅၅၀ ဇာတ်နိပါတ်တော်များ- A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ- A - Abhidhamma TeKar - အဘိဓမ္မာဘာသာဋီကာများ- A - Amazing - အံ.ဖွယ်ထူးခြား ရဟန္တာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ- A - Ashin Arsaryarlinkarya - အရှင်အာစာရာလင်္ကာရ (စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ)- A - Aung San SaYarDaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ- A - Sayar U Aung Kyi - ပဋိပတ္တိနာယကဆရာဦးအောင်ကြီး- A - Sayar U Aung Thin - ဆရာဦးအောင်သင်း-ှQ - Dhamma Questions And Answers - ဓမ္မအမေးအဖြေများ- B - Artist U Ba Kyi - ပန်းချီ ဦးဘကြည်- B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး - ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ- B - Bar Thar Char - ဘာသာခြားလေ့လာရေး- B - Biography - ထေရုပ္ပတ္တိ- B - Sayardaw U Buhd - ဆရာတော်ဦးဗုဓ်- D - Ashin Dhammarakkhita - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ- D - Ashin Dhammassami - အရှင်ဓမ္မဿာမိ (Oxford)- Dhamma Quiz - ဓမ္မဥာဏ်စမ်း- G - Sayar U Goenka - ဆရာဦးဂိုအင်ကာ- General Knowledge - အထွေထွေဗဟုသုတ- Google Earth- H - U Han Htay - ဦးဟန်ဌေး (သုတေသန)- H - U Htay Hlaing - ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်- K - Ashin KayLarTha - အရှင်ကေလာသ (သာသနာဓဇဓမ္မစရိယ)- K - Ashin KuThaLaTharMi - အရှင်ကုသလသာမိ- K - Daw Khin Hla Tin - ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင်- K - Dr Kawvida - ဒေါက်တာကောဝိဒ (မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်)- K - Kammawarsa - ကမ္မ၀ါစာ- K - KyenSar - ကျမ်းစာများ- K - KyiTheLayHtet SaYarDaw - ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်- K - venkawwida venkovida - ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)- L - LalDe Sayardaw - လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး- L - Lawkaneti - လောကနီတိ- M - Myanmar Sarpay - မြန်မာစာပေ (ဘာသာစကား)- M - Dr. Min Tin Mon - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်- M - Maha Buddhawin - မဟာဗုဒ္ဓဝင်- M - MaHarBawDiMyaing - မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး- M - Mahasi Sayardaw - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန- M - ManLal Sayardaw - မန်လည်ဆရာတော်- M - Maung Htoung Myay Zin SaYarDaw - မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော်- M - Min Yu Wai - ဆရာမင်းယုဝေ- M - Mingun Sayardaw - မင်းကွန်းဆရာတော်- M - Mogok Sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ- M - U Myint Swe - ဦးမြင့်ဆွေ - မဟာဝိဇ္ဇာ(လန်ဒန်)- N - Ashin NainDarBiDaZa - အရှင်နိန္ဒာဘိဓဇ- N - Ashin NiPonNa - ဟိတေသီ နေလ အရှင်နိပုဏ- N - Ashin NyarNa - ဓမ္မသုခဆရာတော် အရှင်ဉာဏ- N - Ashin NyarNainDa - ဥက္ကံကြိုချောင်းဆရာတော် အရှင်ဥာဏိန္ဒ- N - Maung Nyo - မောင်ညို- N - Nawadutingarsarra Sayardaw - န၀ဓုတင်္ဂါစာရဆရာတော်- N - Professor Dr.Nandamalabiwuntha - ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ- N - U Narrada - မေဃ၀တီဆရာတော် ဦးနာရဒ- O - U Oattamatharra တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ- Others - အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ- P -3Pitakat - ပိဋကတ်သုံးပုံ- P - Ashin PyinNyarZawTa - PinNyarJotta - ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ(တောင်စွန်းမြို့ )- P - Ashin PyinNyateThara - ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ- P - East Prakkama Sayardaw - စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး အရှေ့ပရက္ကမဆရာတော်- P - pa yate kyee - ပရိတ်ကြီး- P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း- P - Parents - မိဘကျေးဇူး- P - PaYateKyi - PaYateKyee - ပရိတ်ကြီး- P - PharAuk TawYa - PaAuk - ဖားအောက်တောရဆရာတော်- P - PhayarShidKhoe - ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး- P - Phoe Pyin Nyaw - ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း)- P - Professor U Phay Maung Tin - ပါမောက္ခဦးဖေမောင်တင်- P - U PanTiTa - ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော် ပဏ္ဍိတာရာမ - ဦးပဏ္ဍိတ- P - U Phay Aung - ဦးဖေအောင် - ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ညွှန်ကြားရေးဝန်- R - Ashin RarZainDa - YaWaiNwe - အရှင်ရာဇိန္ဒ - ရဝေနွယ် (အင်းမ)- S - Ashin Ardatesaranthi - U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ - ဦးဆန်းလွင်- S - Ashin Sandardika - အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ)- S - Ashin SayKeinDa - Cekinda - ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ- S - Shwe Kyin Sayardaw - ရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး- S - Shwe Ou Min Sayardaw - ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး- T - Ashin Thawparka - အရှင်သောပါက (သာသနဓဇမ္မောစရိယ)- T - Professor Ashin ThiLarNandarbiwuntha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ- T - ThaPyayKan Sayardaw - သပြေကန်ဆရာတော် အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ- T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့- T - Theingu - သဲအင်းဂူ- T - Thi Da Gu - သီတဂူ- T - ThinGarHaKa - Taung Thar - သင်္ဂါဟက - တောင်သာ- T - U Thu Kha - ဦးသုခ- T - U ThuMinGaLa - ဥူးသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော်- W - DhammaBayYee - Ashin Wiriya - Taung Soon - ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း)- W - Waibuu sayardaw - ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး- W - WiNee - ဝိနည်းဘာသာဋီကာများ- W - Winissara - ဝိနိစ္ဆယ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဝိနိစ္ဆယများ- W - WiPatThanar - Vipassana - ဝိပဿနာ- W - Withoatdi Mag - Pure Enlightenment - ဝိသုဒ္ဓိမဂ်- W - Wunna Thiri - Wanna Thiri - ဝဏ္ဏသီရိ- W - Wuntharnu - ၀ံသာနု- Y - Yaw Sayardaw - ယောဆရာတော် - ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ- Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ- Z - Ashin Zawana - အရှင်ဇ၀န - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)- Z - U Zanitarlinkarra - ဦးဇနိတာလင်္ကာရ- Z - ZayYaMayDaNe Sayardaw - ဇေယျမေဒနီဆရာတော် Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ News - သတင်းများ
P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း - Most Recent
News - သတင်းများ တတိယအကြိမ...
Added: 29th December 2012
Posted By: kappiya
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArroOFl6d6x1dHNPWkhKMjJYS2NjQmdjVnhrVllOS0E#gid=0 တွင်မိမိရွတ်ဆိုပူဇော်နိုင်မည့် အချိန်ကို...
Tags: တတိယအကြိမ် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ ပဋ္ဌာန်း ပဌာန်း pahtan patan pa htan non stop maha pahtan ceremony Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း မဟာပဋ္ဌာန်း...
Posted By: sakura
Tags: မဟာပဌာန်းအလွယ်ကျက်မှတ်နည်း မဟာပဌာန်း ပဌာန်း ပဋ္ဌာန်း pahtan patan pa htan pa tan Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ အကြောင်းတ...
Added: 5th January 2012
အကြောင်းတရားတို့၏ အစွမ်းသတ္တိများ -ဒေါက်တာအေးကျော်
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ပဋ္ဌာန်း , ဒေါက်တာအေးကျော် , dr.ayekyaw , dr aye kyaw , tharthanaparla , sarsanaparla , thar tha na par la , sar sa na par la , pahtan , patan , pa htan , pa tan Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မိုးကုတ်ဆ...
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ ဥပနိဿယအတိုင်း ပဋ္ဌာန်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တရားတော်-ဦးခင်စိုး
Tags: မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဦးခင်စိုး ပဋ္ဌာန်း မိုးကုတ် သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ mogoksayardaw mogoksayartaw mogok sayardaw sayartaw sa yar taw pahtan patan pa htan pa tan U khin soe ukhinsoe u khinsoe tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း...
၂၄ ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် Photo
ppt/pdf/pps powerpoint show, pdf
Tags: ၂၄ ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် Photo 24 pyit see pathan pahtan patan pa htan pa tan pa than Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း...
၂၄ ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် .. အသံထွက်ရွတ်ဖတ်နည်းနှင့်
မြန်မာပြန် မဏိဇောတ စုဆောင်းပူဇော်သည်
Tags: ၂၄ ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် နှင့် မြန်မာပြန် မဏိဇောတ pahtan pathan patan pa htan pa tan pa than 24pyitsee 24 pyit see 24 pyitsee Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ငရံ့မင်း...
Posted By: nkauparama
ငရံ့မင်း ပရိတ် ပါဠိတော်
Tags: ငရံ့မင်း ပရိတ် ပါဠိတော် ငရံ့မင်းပရိတ် ပါဠိ ngayantminpayate nga yant min pa yate parli par li Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / Slideshows ပဌာန်း(၂၄)�...
Tags: ပဌာန်း(၂၄)ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း ၂၄ပစ္စည်း pahtan patan pathan pa htan pa tan pa than Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ရွှေတိဂုံ...
Tags: ရွှေတိဂုံ မဟာပဋ္ဌာန်း ပဋ္ဌာန်း pahtan pathan patan pa htan pa tan pa than mahapahtan shwedagon Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ပဋ္ဌာန်း...
ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယုဒ္ဒေသ နှင့် ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် (နေ့စဉ် ရွတ်ပွား ပူဇော်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။)
Tags: ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယုဒ္ဒေသ နှင့် ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် pahtan pathan patan pa htan pa tan pa than mahapahtan Pages: 123 of 3